COVID and the rise of ROBOTS! – SUNNY Tech News
COVID and the rise of ROBOTS!
Posted byDaxDo 26th Oct 2020 28th Oct 2020 Posted inUncategorized
စက်ရုပ်တွေရဲ့ မြင့်မားလာတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က Covidကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှ ဘယ်လောက်အထိ အထောက်အကူပြုနိုင်နေပြီလဲ?
၂၀ရာစုအလွန်မှာ AI ( Artificial Intelligence ) နည်းပညာနဲ့စက်ရုပ်တွေက လူသားအလုပ်သမား တွေနေရာမှာ အစားထိုးနိုင်လောက်တဲ့ထိ အဆင့်အတန်းမြင့်မားလာကြပါတယ်။ ခုဆိုရင် စက်ရုပ်တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဟာ တခြားနယ်ပယ်တွေမှာသာမက အခုလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ COVID ကာကွယ်ရေးအတွက်ပါ အသုံးဝင်လာပါပြီ။ ဒါကြောင့် လတ်တလော COVID ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ စက်ရုပ်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ ပုံရိပ်တစ်ချို့ကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ အခြေစိုက် ZMP ( Zero Moment Point ) Company ဟာ စက်ရုပ်တွေ၊ မောင်းသူမဲ့ကားတွေကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေ တဲ့ နာမည်ကြီး company တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ZMP company ရဲ့ CEO ဖြစ်သူ Hisashi Taniguchi က ခုလိုကာလမှာ Covid ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် အထောက်အကူပေးနိုင်မယ့်သယ်ဆောင်ရေးစက်ရုပ်တွေကို ထပ်မံမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တစ်မီတာခန့်မြင့်မားတဲ့ ဒီစက်ရုပ်ဟာ အလေးချိန် (50) ကီလိုဂရမ်ခန့်သယ်ဆောင်နိုင်ပြီးတစ်နာရီကို (6) ကီလိုမီတာအမြန်နှုန်းနဲ့ ခရီးသွားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခေါက်ကို သယ်ဆောင်ပို့ဆောင်ရေး (4) ကြိမ်ကနေ (8) ကြိမ်အထိ ပြုလုပ် နိုင်ပါ တယ်။ စက်ရုပ်ရဲ့ရှေ့ဘက်မျက်နှာပြင်မှာ ဒီဂျစ်တယ်မျက်လုံးများပါဝင်ပြီး မောင်းသူမဲ့၊ကိုယ်ပိုင်မောင်းနှင်နိုင်တဲ့ လုံခြုံရေးစက်ရုပ် အမျိုးအစားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်ရုပ်ကို PATORO လို့ခေါ်ပြီးတော့ တခြား သယ်ဆောင်ရေးစက်ရုပ်တွေ၊ မောင်းသူမဲ့ စက်ရုပ်တွေပါဝင်တဲ့ Anti-Coronavirus Robot Squad ဆိုတဲ့ အဖွဲ့လည်းရှိပါသေးတယ်။
တိုကျိုအ‌ခြေစိုက် အီလက်ထရောနစ် company Omron Corp; ကလည်း နိုင်ငံပေါင်း(20) ကျော်က အဖွဲ့တွေနဲ့ ပူးပေါင်ပြီး ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နဲ့ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းစက်တွေ တပ်ဆင်ထားတဲ့ အလိုလျောက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစက်ရုပ်များကို ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စက်ရုပ်တွေမှာ လေဆာရောင်ခြည်သုံးစက်တွေကိုတပ်ဆင်ထားပါတယ်၊ ပြီးတော့ သူတို့ဆီကိုပို့လွှတ်ထားတဲ့မြေပုံအရ အတားအဆီးတွေကိုလည်း ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်၊ စက်ရုံတွေမှာလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာ စမ်းသပ်ထားပြီးသားပါ။” လို့ Company ရဲ့ CEO ဖြစ်သူ Yuko Murayama ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Kanagawa Prefecture ရဲ့စက်မှုမြို့တော် Kawasaki မှာအခြေစိုက်တဲ့ Mira Robotics Inc; ကတော့ အဝေးထိန်းစက်ရုပ်တွေကိုတီထွင်နေပြီး အဲဒီစက်ရုပ်မှာ ဘီးပေါ်မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ အနိမ့်အမြင့်ချိန်လို့ရတဲ့ လက်တစ်စုံပါဝင်ပါတယ်။ အလုပ်သမားအင်အားလျော့နည်းလာမှုကို ကူညီဖို့အတွက် ရည်ရွယ်တာပါ။
“Ugo” လို့ခေါ်တဲ့ ဒီစက်ရုပ်ကို အဆောက်အအုံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အသုံးပြုဖို့ တီထွင်ခဲ့ထာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ဖို့နဲ့ ပိုးမွှားကူးစက်နှုန်းကို လျှော့ချဖို့ လိုအပ်လာချိန်မှာတော့ အဆောက်အအုံရဲ့အပူချိန်ကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်းစနစ်အပြင် ဓာတ်လှေကားခလုတ်တွေနဲ့ တံခါးလက်ကိုင်တွေမှာရှိတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေကိုသတ်ဖို့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အသုံးပြုထားတဲ့ လက်တစ်စုံကိုလည်း ထပ်မံထပ်သွင်းခဲ့ပါတယ်” လို့ Company ရဲ့ CEO Ken Matsui က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အခုလိုအချိန်မှာပဲ Sharp Corp; ကလည်း သူတို့ရဲ့ Mobile စက်ရုပ် RoBoHon ကို တိုကျို၊ Toranomon ခရိုင် မှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ RoBoHon လို့ခေါ်တဲ့ချစ်စရာစက်ရုပ်ကလေးက ဧည့်သည်တွေကို စစ်ဆေးတာ၊ ဖောက်သည်တွေကိုဆက်သွယ်ပေးတာ နဲ့ ရပ်ဝေးကဝန်ထမ်းတွေကိုသတိပေးတာ စတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို Smart phone ဒါမှမဟုတ် Tablet ကိုအသုံးပြုပြီး ခိုင်းစေလို့ ရတဲ့စက်ရုပ်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ “အကြံဉာဏ်ကတော့ ရောဂါကူးစက်မှုအန္တရာယ်ကိုလျော့နည်းစေအောင် လူချင်းထိတွေ့ဆက်သွယ်မှုကို လျှော့ချဖို့ပဲ ဖြစ်တယ်” လို့ Sharp မှ တာဝန်ရှိသူ Miho Kagei က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
စက်ရုပ်တွေကို အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများထုပ်ပိုးတပ်ဆင်ဖို့ အသုံးပြုတဲ့ Kawasaki ရဲ့ duAro2 dual-arm unit ပေါ်မှာအခြေခံထားပါတယ်။ လူနာများရဲ့တံတွေးနမူနာများကိုရယူခြင်း၊ ဗိုင်းရပ်စ်ကို်စမ်းသပ်ခြင်း၊ ဆေးရုံသို့ဝင်လာသောလူနာများအားအပူချိန်တိုင်းခြင်းနဲ့ အစားအစာနဲ့ဆေးဝါးများကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း စတာတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်အောင်စီစဉ်ထားပါတယ်။ “စက်တင်ဘာလမှာစမ်းသပ်မှုတွေပြီးဆုံးပြီး အခု အောက်တိုဘာလမှာ ကိုဘော့ကဆေးရုံတစ်ခုမှာ ခွဲစိတ်မှုစတင်ဖို့စီစဥ်ထားပါတယ်။ ဒီစက်ရုပ်တွေက ရောဂါကူးစက်မှုကိုတားဆီးပေးပြီး စမ်းသပ်ခန်းထဲမှာ အလုပ်ပမာဏကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်” လို့ Company ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Izumi Yamamotoကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Covid ကာလမှာ ကူးစက်မှုတွေလျော့ကျစေဖို့ အခုလိုမျိုး လူသားအစားထိုးစက်ရုပ်တွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ စက်ရုပ်တွေရဲ့ မြင့်မားလှတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကလည်း ရောဂါကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ တကယ်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲ့တော့ စက်ရုပ်တွေဆီက ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အထောက်အပံ့တွေနဲ့ အမြန်ဆုံးပြန်အဆင်ပြေဖို့ ဆန္ဒပြုရင်း အားလုံးလည်းကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်။ အဆုံးထိဖတ်ပေးတဲ့အတွက် အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Traffic on the street? How about wearing this Iron Man suit to work?
Tech Products to keep you productive for Work-From-Home | Work-from-home အတွက် မရှိမဖြစ်နည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းများ